စံချိန်မှတ်တမ်းတွေ ချိုးဖျက်ဖို့အတွက် မွေးဖွားလာသူ စီရော်နယ်လ်ဒို – the One Sports Journal
စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေ ချိုးဖျက်ဖို့အတွက် ဖြစ်တည်လာတဲ့လူသားတစ်ယောက်လား . .တစ်ချိန်ချိန်ကျရင် ရပ်တန့်သွားမှာပါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြသူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ စီရော်နယ်လ်ဒို အာရုံမရသေးဘူး။ ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ တကယ့်ဂန္ထဝင်ကစားသမားကြီးတွေ ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ရယူခဲ့တဲ့စံချိန်တွေက စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် ငှက်ပျောသီးအခွံနွှာရသလောက်ပဲဖြစ်နေတာက စံချိန်ရှင်ဂန္ထဝင်ကြီးတွေအတွက် မျက်နှာပျက်စရာဖြစ်နေတယ်။
အသက်(၃၆)နှစ်ဆိုတဲ့ သဘာဝရဲ့သက်မှတ်ချက်က စီရော်နယ်လ်ဒိုကို တားဆီးနိုင်ဖို့မစွမ်းသာသေးဘူး။ ဒီလောက်အထိ အောင်မြင်မှုတွေရယူခဲ့ပြီးတာတောင် နောက်ထပ်နောက်ထပ်သော အောင်မြင်မှုတွေရယူချင်တဲ့ စိတ်က အခုအချိန်အထိအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ တောက်လောင်နေတုန်းပဲ။ အခုလည်းကြည့်လေ။ ယူရိုပြိုင်ပွဲ အဖွင့်ပွဲမှာပဲ စံချိန်သစ်တွေတစ်လှေကြီးရယူခဲ့ပြန်တယ်။
ဟန်ဂေရီနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက ယူရိုပြိုင်ပွဲ(၅)ကြိမ်(၂၀၀၄၊ ၂၀၀၈၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၂၀)ကစားခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါက ဘောလုံးသမိုင်းမှာ သူ့ထက် အရင့်အရင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့သမိုင်းတွေရေးသားခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော်တွေတောင် မလုပ်နိုင်တဲ့အရာမျိုး။ ဟန်ဂေရီနဲ့ပွဲဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် ယူရိုနဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲနှစ်ခုပေါင်း (၃၉)ပွဲမြောက်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ဂျာမနီဂန္ထဝင်ကစားသမားကြီးရှဝိုင်းစတိုင်ဂါရဲ့ စံချိန်ကို တစ်ပွဲအသာနဲ့ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြန်တယ်။
ဒီလောက်နဲ့တင် စီရော်နယ်လ်ဒိုက မကျေနပ်သေးဘူး။ ပယ်နယ်တီကနေ တစ်ဂိုးသွင်းပြီး ပြင်သစ်ဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူးပလာတီနီရဲ့ ယူရိုပြိုင်ပွဲသွင်းဂိုးအများဆုံး (၉)ဂိုးစံချိန်ကို တစ်ဂိုးအသာနဲ့ ကျော်ဖြတ်ခဲ့သလို တတိယမြောက်ဂိုးကိုလည်း လှပတဲ့ Open Play ကနေသွင်းယူခဲ့တာကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အသက် ၃၆နှစ်၊ ၁၃၀ ရက်နဲ့ ယူရိုပွဲစဉ်တစ်ပွဲမှာ နှစ်ဂိုးနဲ့အထက်သွင်းယူခဲ့တဲ့ အသက်အကြီးဆုံးကစားသမားအဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့တယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုမတိုင်ခင်က ယူကရိန်းဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူးကြီးရှက်ဗ်ချင်ကိုဟာ ယူရို-၂၀၁၂ ပြိုင်ပွဲတုန်းက ဆွီဒင်နဲ့ပွဲမှာ (၂)ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး အသက် ၃၅ နှစ်၊ ၂၅၆ ရက်နဲ့ စံချိန်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီစံချိန်ကို (၉)နှစ်အကြာမှာပဲ စီရော်နယ်လ်ဒို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပြီ။
အခုဆိုရင် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ နိုင်ငံတကာသွင်းဂိုးက (၁၀၆)ဂိုးအထိရှိလာပြီဖြစ်လို့ ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံးအဖြစ်စံချိန်တင်ထားတဲ့ အီရန်ဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူးအလီဒါယီရဲ့ (၁၀၉)ဂိုးစံချိန်ကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ (၄)ဂိုးသာလိုတော့တယ်။ အခုအချိန်အထိ ရပ်တန့်လို့မရတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြသနေတဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် (၄)ဂိုးပမာဏဆိုတာက တော်တော်လေးကို ရယ်စရာကောင်းတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ပဲ။
အခုဆိုရင် စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ကစားသမားဘဝမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေက စာရွက်မှာချရေးရင် A4 နှစ်ရွက်စာလောက်တောင်ရှိမယ်ထင်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက မော်ရင်ဟိုပြောခဲ့သလို စံချိန်မှတ်တမ်းတွေက စီရော်နယ်လ်ဒိုကို အခုလိုမျိုး စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်လာအောင် တွန်းအားဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ ရာနှုန်းပြည့်မှန်တယ်လို့ပြောရမယ်။
အခုအချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရော၊ ပင်နယ်ဒိုဆိုပြီး လှောင်ပြောင်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကို ပြောချင်တာက စီရော်နယ်လ်ဒို နောက်ထပ်ဘယ်လိုစံချိန်တွေ ထပ်ယူပြဦးမလဲဆိုတာ စိတ်အေးအေးနဲ့သာ စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါဆိုတာပါပဲ . . .
စံခ်ိန္မွတ္တမ္းေတြ ခ်ိဳးဖ်က္ဖို႔အတြက္ ေမြးဖြားလာသူ စီေရာ္နယ္လ္ဒို
စီေရာ္နယ္လ္ဒိုဟာ စံခ်ိန္မွတ္တမ္းေတြ ခ်ိဳးဖ်က္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္တည္လာတဲ့လူသားတစ္ေယာက္လား . .တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္က်ရင္ ရပ္တန႔္သြားမွာပါဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသူေတြရဲ႕ ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ စီေရာ္နယ္လ္ဒို အာ႐ုံမရေသးဘူး။ ေဘာလုံးသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ တကယ့္ဂႏၴဝင္ကစားသမားႀကီးေတြ ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ ရယူခဲ့တဲ့စံခ်ိန္ေတြက စီေရာ္နယ္လ္ဒိုအတြက္ ငွက္ေပ်ာသီးအခြံႏႊာရသေလာက္ပဲျဖစ္ေနတာက စံခ်ိန္ရွင္ဂႏၴဝင္ႀကီးေတြအတြက္ မ်က္ႏွာပ်က္စရာျဖစ္ေနတယ္။
အသက္(၃၆)ႏွစ္ဆိုတဲ့ သဘာဝရဲ႕သက္မွတ္ခ်က္က စီေရာ္နယ္လ္ဒိုကို တားဆီးႏိုင္ဖို႔မစြမ္းသာေသးဘူး။ ဒီေလာက္အထိ ေအာင္ျမင္မႈေတြရယူခဲ့ၿပီးတာေတာင္ ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈေတြရယူခ်င္တဲ့ စိတ္က အခုအခ်ိန္အထိအရွိန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ ေတာက္ေလာင္ေနတုန္းပဲ။ အခုလည္းၾကည့္ေလ။ ယူ႐ိုၿပိဳင္ပြဲ အဖြင့္ပြဲမွာပဲ စံခ်ိန္သစ္ေတြတစ္ေလွႀကီးရယူခဲ့ျပန္တယ္။
ဟန္ေဂရီနဲ႔ကစားခဲ့တဲ့ပြဲမွာ စီေရာ္နယ္လ္ဒိုက ယူ႐ိုၿပိဳင္ပြဲ(၅)ႀကိမ္(၂၀၀၄၊ ၂၀၀၈၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၂၀)ကစားခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါက ေဘာလုံးသမိုင္းမွာ သူ႔ထက္ အရင့္အရင္ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့သမိုင္းေတြေရးသားခဲ့တဲ့ နာမည္ေက်ာ္ေတြေတာင္ မလုပ္ႏိုင္တဲ့အရာမ်ိဳး။ ဟန္ေဂရီနဲ႔ပြဲဟာ စီေရာ္နယ္လ္ဒိုအတြက္ ယူ႐ိုနဲ႔ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲႏွစ္ခုေပါင္း (၃၉)ပြဲေျမာက္ကစားခဲ့တဲ့ပြဲျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဂ်ာမနီဂႏၴဝင္ကစားသမားႀကီးရွဝိုင္းစတိုင္ဂါရဲ႕ စံခ်ိန္ကို တစ္ပြဲအသာနဲ႔ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ျပန္တယ္။
ဒီေလာက္နဲ႔တင္ စီေရာ္နယ္လ္ဒိုက မေက်နပ္ေသးဘူး။ ပယ္နယ္တီကေန တစ္ဂိုးသြင္းၿပီး ျပင္သစ္ဂႏၴဝင္တိုက္စစ္မႉးပလာတီနီရဲ႕ ယူ႐ိုၿပိဳင္ပြဲသြင္းဂိုးအမ်ားဆုံး (၉)ဂိုးစံခ်ိန္ကို တစ္ဂိုးအသာနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့သလို တတိယေျမာက္ဂိုးကိုလည္း လွပတဲ့ Open Play ကေနသြင္းယူခဲ့တာေၾကာင့္ စီေရာ္နယ္လ္ဒိုဟာ အသက္ ၃၆ႏွစ္၊ ၁၃၀ ရက္နဲ႔ ယူ႐ိုပြဲစဥ္တစ္ပြဲမွာ ႏွစ္ဂိုးနဲ႔အထက္သြင္းယူခဲ့တဲ့ အသက္အႀကီးဆုံးကစားသမားအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့တယ္။
စီေရာ္နယ္လ္ဒိုမတိုင္ခင္က ယူကရိန္းဂႏၴဝင္တိုက္စစ္မႉးႀကီးရွက္ဗ္ခ်င္ကိုဟာ ယူ႐ို-၂၀၁၂ ၿပိဳင္ပြဲတုန္းက ဆြီဒင္နဲ႔ပြဲမွာ (၂)ဂိုးသြင္းယူခဲ့ၿပီး အသက္ ၃၅ ႏွစ္၊ ၂၅၆ ရက္နဲ႔ စံခ်ိန္တင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲဒီစံခ်ိန္ကို (၉)ႏွစ္အၾကာမွာပဲ စီေရာ္နယ္လ္ဒို ခ်ိဳးဖ်က္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ။
အခုဆိုရင္ စီေရာ္နယ္လ္ဒိုဟာ ႏိုင္ငံတကာသြင္းဂိုးက (၁၀၆)ဂိုးအထိရွိလာၿပီျဖစ္လို႔ ေဘာလုံးသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ သြင္းဂိုးအမ်ားဆုံးအျဖစ္စံခ်ိန္တင္ထားတဲ့ အီရန္ဂႏၴဝင္တိုက္စစ္မႉးအလီဒါယီရဲ႕ (၁၀၉)ဂိုးစံခ်ိန္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ (၄)ဂိုးသာလိုေတာ့တယ္။
အခုအခ်ိန္အထိ ရပ္တန႔္လို႔မရတဲ့ေျခစြမ္းမ်ိဳးျပသေနတဲ့ စီေရာ္နယ္လ္ဒိုအတြက္ (၄)ဂိုးပမာဏဆိုတာက ေတာ္ေတာ္ေလးကို ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ပဲ။ အခုဆိုရင္ စီေရာ္နယ္လ္ဒိုရဲ႕ကစားသမားဘဝမွာ ရရွိခဲ့တဲ့ စံခ်ိန္မွတ္တမ္းေတြက စာ႐ြက္မွာခ်ေရးရင္ A4 ႏွစ္႐ြက္စာေလာက္ေတာင္ရွိမယ္ထင္တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းတုန္းက ေမာ္ရင္ဟိုေျပာခဲ့သလို စံခ်ိန္မွတ္တမ္းေတြက စီေရာ္နယ္လ္ဒိုကို အခုလိုမ်ိဳး စိတ္အားထက္သန္မႈျဖစ္လာေအာင္ တြန္းအားျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ ရာႏႈန္းျပည့္မွန္တယ္လို႔ေျပာရမယ္။
အခုအခ်ိန္မွာ စီေရာ္နယ္လ္ဒိုကို ခ်စ္တဲ့ပရိသတ္ေတြေရာ၊ ပင္နယ္ဒိုဆိုၿပီး ေလွာင္ေျပာင္ေနၾကတဲ့ပရိသတ္ေတြကို ေျပာခ်င္တာက စီေရာ္နယ္လ္ဒို ေနာက္ထပ္ဘယ္လိုစံခ်ိန္ေတြ ထပ္ယူျပဦးမလဲဆိုတာ စိတ္ေအးေအးနဲ႔သာ ေစာင့္ၾကည့္ေနလိုက္ပါဆိုတာပါပဲ . . .
အရက်မူးပြီးဘောလုံးကန်ရင်တောင် ဖိုဒန်ထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့ ဂတ်စ်ကွိုင်း